(SAWIRRO) Mahsruuca marwada caafimaadka oo lagu daahfuray magaalada Garowe. | puntlandi.com
Garowe (Puntlandi) Wasiirka caafimaadka dowladda Puntland, Dr, Cabdinaasir Cismaan Cuuke ayaa maanta magaalada Garowe ku daahfuray mashruuc lagu magacaabo Marwo Caafimaad, oo ah mashruuc kor loogu qaadidoono caafimaadka hooyada iyo ubadka.
Mashruucaan ayaa lagu caawindoonaa hooyada iyo dhallaanka ku dhaqan Puntland, iyadoo diirada la saarayo waxbaridda iyo kaalmeynta hooyada uurka leh iyo horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee ay hooyada iyo ubadka da´dooda ka hooseyso 5 sano u baahan yihiin.
Muhiimada laga leeyahay Mashruucaan ayaa ah, hakinta umul-raaca tirada badan ee ragaadiyey bulshada Soomaaliyeed iyo in la helo tirakoobka ubadka dhashay bil- ama sanad walba.
Munaasabadii mashruucaan lagu daahfurayay waxaa ka qeyb galay madax kala duwan oo ka socotay dowladda Puntland, ururada mashruucaan ka wada shaqeynaya ee kala ah Somali Swedish Research Association SSRA, Poeh, HEG, ForumSyd iyo jaamacadda bariga Afrika.
Wajiga ugu horeeya ee mashruucaan ayaa sida uu qorshuhu wuxuu ahaandoona mid lagu tababaridoono haweenka ka shaqeeya caafimaadka, kuwaas oo dhawaan tababar caafimaad loogu furidoono xarunta jaamacadda bariga ee Garowe.
Wasiirka caafimaadka Puntland, Dr, Cabdinaasir Cuuke ayaa soo dhoweeyay mashruucaan Marwada caafimaadka, isagoo sheegay inuu rajeynayo in dadka reer Puntland si weyn uga faa’idaysandoonaan. Waxaa kale oo wasiirku sheegay inuu qeyb ka ahaandoono dadaalada wasaaraddu ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha caafimaad ee bulshada.